Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Xubno Katirsan Baarlamaan Kusheega Wayaanaha oo Ladhaawacay.
Deg Deg: Xubno Katirsan Baarlamaan Kusheega Wayaanaha oo Ladhaawacay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in xubno katirsan baarlamaan kusheegaya wayaanaha lagu dhaawacay duleedka magaalada Gonder ee dhulka Axmaarada.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa dhaawac halis ah loogaysto nin katirsan baarlamaan kusheega wayaanaha, waxaana sidoo kale lasigay xubno kale oo katirsan baarlamaanka magac uyaalka ah ee wayaanaha. Dhinaca kale waxaa goobta lagu dilay qaar kamid ah ilaalidii xubnaha laweeraray ee baarlamaanka wayaanaha katirsanaa.
Warka ayaa intaas kudaraya in lagubay baabuurkii ay wateen xubnaha laweeraray oo socdaal kumarayay dhulka Axmaarada, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay arkayeen baabuurka oo gubanaya iyo xubnaha baarlamaanka wayaanaha katirsan iyo ilaaladooda oo cararaya.
Xubnaha laweeraray oo sida lasheegay katirsanaa xisbi kusheega ANDM oo sheegta in uu matalo shacabka Axmaarada ayaa kabaqaad u ah kooxda TPLF oo ay kumidoobeen magaca EPRDF, waxayna xisbi kusheegu kujireen socdaal ay doonayeen in ay kumarin habaabiyaan bulshada kudhaqan Gobolka Axmaarada.
Dadka deegaanka ayaa siwayn usoo dhaweeyay weerarka lagu qaaday xubnaha dhagar qabayaasha ah ee katirsan baarlamaanka Wayaanaha waxayna dadwaynuhu sheegeen in ay wadeen howlo shacabka kadhan ah.
Dhinaca kale taliska wayaanaha ayaa ciidamo kusoo daabulay goobtii lagu weeraray xildhibaano kusheega baarlamaanka wayaanaha katirsanaa, waxayna dhibaatooyin kala duwan ugaysteen dadka deegaanka.